यो साता शेयरबजारमा यी कम्पनीका लगानीकर्ताले धेरै कमाए ? - नेपालबहस
यो साता शेयरबजारमा यी कम्पनीका लगानीकर्ताले धेरै कमाए ?
| १३:१९:३९ मा प्रकाशित
२८ जेठ, काठमाडौं । यो साता शेयरबजारले नयाँ उचाई कायम गरेका छ । यस साता नेप्से परिसूचक साढे २९ सय विन्दू पार गरेको हो ।
शेयरबजारले नयाँ उचाई कायम गर्दा फाइनान्स विकास बैंक र वाणिज्य बैंकको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको हो । यस साता कारोबार रकम पनि उच्च रहेको छ ।
हेरौं यस साता कुन कम्पनीका लगानीकर्ताले कति कमाए ?
आइतबार : साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार ९ कम्पनीका लगानीकर्ताले धेरै कमाए । आइतबार चार वाणिज्य बैंकसहित ९ कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढि कमाए हुन् ।
महिला लघुवित्तका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाएका छन् । यस दिन यी दुई कम्पनी शेयरमूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भई लगानीकर्ताले धेरै कमाउन सफल भएका हुन् ।
सोमबार : साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार १७ कम्पनीका लगानीकर्ताले धेरै कमाए । यस दिन आठ फाइनान्ससहितसहित १७ कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढि कमाएका हुन् ।
आज पोखरा फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी र आइसीएफसी फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाएका छन् । यस दिन यी तीन कम्पनी शेयरमूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भई लगानीकर्ताले धेरै कमाउन सफल भएका हुन् ।
त्यस्तै, गुडवील फाइनान्स, लम्विनी विकास बैंक, रिडि हाइड्रोपावर कम्पनी, पोखरा फाइनान्स् लगानीकर्ताले धेरै कमाएका हुन् ।
मंगलबार : साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार १४९ कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए । यस दिन २१७ कम्पनीको कारोबार भएको हो ।
बुधबार: साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार ८ कम्पनीका लगानीकर्ताले धेरै कमाए । यस दिन ५ हाइड्रो र तीन फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढि कमाएका हुन् ।
बिहीबार: साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार एक दर्जन कम्पनीका लगानीकर्ताले धेरै कमाए । यस दिन ११ हाइड्रो र १ फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढि कमाएका हुन् ।
आज पोखरा फाइनान्स र अन्य ११ हाइड्रो कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाएका छन् । यस दिन पोखरा फाइनान्सको शेयरमूल्य ९ प्रतिशत बढिका दरले वृद्धि भई लगानीकर्ताले धेरै कमाउन सफल भएका हुन् ।
त्यस्तै, आज पाँचथर, न्यादी, माउन्टेन, छ्यादी, रिडि, बरुण, सिइडीबी, युनाइटेड मोदी र अरुण भ्याली हाइड्रोका लगानीकर्ताशलगानीकर्ताले धेरै कमाएका हुन् ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी पूर्ण रुपमा खोल्न पाइने १८ घण्टा पहिले
देउवालाई प्रधामन्त्री बनाउनु पञ्चायती ब्यवस्था ब्युँताउनु हो: प्रधानमन्त्री ओली ५ दिन पहिले
चामेबजार नजिकै थुनिएको मस्र्याङ्दी नदी २ दिन पहिले
जेठ महिनाभर निषेधाज्ञा गर्ने तयारी, खाद्यान्न र किराना पसल फेरि बिहान ९ बजेसम्म खोल्न पाइने ३ हप्ता पहिले
भारतमा एकै दिन एक लाख ३४ हजार कोरोना संक्रमित थपिए ३ हप्ता पहिले
सामूहिक बलात्कारका अभियुक्त १४ वर्षपछि घरैबाट पक्राउ ४ दिन पहिले
आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी कार्ययोजना बनाउन गृहको निर्देशन २ हप्ता पहिले
नेपाल-खनाल पक्ष राजीनामा दिन तयार, ओलीको पदमुक्त हुने सम्भावना १ महिना पहिले
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ९ करोड ९७ लाख भन्दा बढी ५ महिना पहिले
राज्यले दिएको सुविधा उपभोग गर्न नपाएको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो ! २ वर्ष पहिले
लक्ष्मी बैंकको ११३औँ शाखा सप्तरीको राजविराजमा २ वर्ष पहिले